सानो व्यवसाय सामाजिक मीडिया उपयोग र परिणामहरू | Martech Zone
शुक्रवार, सेप्टेम्बर 30, 2011 बुधबार, अक्टोबर 26, 2011 Douglas Karr
CrowdSPRING यो इन्फोग्राफिक सानो व्यापार सामाजिक मीडिया बानी मा प्रकाशित छ। जब मैले पहिलो पटक प्रयोगमा तथ्या .्कहरू देखेको थिएँ, म कसरी थोरै प्रयोग तथ्या small्कहरू सानो व्यवसायको लागि हुन् भनेर अलिअलि परेको थिएँ। गहिरो नजर राख्नुहोस् र मलाई लाग्छ यो कुनै आश्चर्यकोलागि छैन, यद्यपि। यो एक सफल सानो व्यवसाय चलाउन धेरै सघन संसाधन छ त्यसैले एक सामाजिक मिडिया उपस्थिति धान्न चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
त्यो भनियो - यो अन्य मान्छेहरु को लागी एक अविश्वसनीय अवसर हो जुन सानो व्यवसाय चलाउँछ। यसले देखाउँदछ कि त्यहाँ वास्तवमा प्रतिस्पर्धा बाहिर छ! एउटा ब्लग सुरू गर्नुहोस् र आफ्नै बजारको स्वामित्व पाउनुहोस्। सामाजिक मिडियामा संलग्न हुनुहोस् र तपाईंको दर्शक बनाउनुहोस्। यो तपाइँको व्यवसाय रातारात बदल्न गइरहेको छैन, तर यो एक लगानी हो कि तिर्नेछ। यसले हप्ताहरू लिन सक्दछ, यसले महिनौं लिन सक्दछ ... तर तपाइँ स engage्लग्न हुन आवश्यक छ। यदि तपाइँ गर्नुहुन्न भने, तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूले गर्नेछन्।
क्राउडसोर्स्ड लोगो र ग्राफिक डिजाइन भीड एसपीआरआईआई द्वारा
कसरी पृष्ठ बुकमार्क र तिनीहरूलाई पछि पढ्नुहोस्
सेप्टेम्बर १,, २०११ 30::2011० अपराह्न
यो पक्कै पनि धेरै रोचक जानकारी छ ... एक तथ्या though्क यद्यपि, मलाई लाग्दछ कि एकदम प्रभावहीन स्टेटिक छ कि फेसबुक फेसबुक को 51१% प्रयोगकर्ताहरू उनीहरूले पछ्याउने ब्राण्डको उत्पादनहरू किन्न बढी सम्भावना हुन्छ वा प्रशंसक हुन्।
साँच्चै? केवल %१%? यदि हामीले मान्यौं कि अरूहरू उदासीन छन् भने, यो ठीक छैन। तर के हुन्छ यदि हामी अनुमान लगाउँछौं कि बाकीहरू वास्तवमै उत्पादनहरू द्वारा कम सम्भावित छन्? यो त्यति धेरै राम्रो संख्या होइन।
म विशेष गरी सोच्छु कि यो उच्च हुनेछ, किनकि प्राय जसो व्यक्तिहरू उनीहरूको पहिले नै मन पराउने ब्रान्डहरू अनुसरण गर्ने अधिक संभावना हुन्छन्। कुन अवस्थामा, यो स्टेटको कुनै पनि अर्थ हुँदैन? तपाइँ स्पष्ट रूपमा, तपाइँबाट खरीद गर्न अधिक सम्भावित ब्रान्डहरू अनुसरण गर्नुहोस्। त्यसोभए यसको पृष्ठभूमि के हो? के तिनीहरू खास गरी फेसबुकको फ्यान भएको प्रत्यक्ष परिणामको रूपमा किनेको अधिक संभावना छ? यदि त्यसो हो भने, त्यो वास्तव मा केहि मतलब हुनेछ।
तर मलाई लाग्दैन कि त्यो पक्का गर्नको लागि कुनै पनि तरीका हुन्छ। त्यसो भए, जस्तो देखिन्छ, मलाई लाग्दैन कि यो संख्यामा कसैले पनि धेरै पढ्नु पर्छ।
मार्स 26, 2012 मा 4: 39 एएम
यो निश्चित रूप मा धेरै रोचक जानकारी छ